Maka: isikhangiso sombhalo | Martech Zone
Maka: isikhangiso sombhalo
Izinto ezi-3 okufanele uzicabangele ngezinguquko zesikhangiso se-Google
NgoMsombuluko, Septemba 12, 2016 NgoLwesibili, Septhemba 13, 2016 UTim Krozek
Izikhangiso zombhalo ezinwetshiwe ze-Google (ETAs) zibukhoma ngokusemthethweni! Ifomethi entsha yesikhangiso eyiselula eqala ukukhishwa kuwo wonke amadivayisi eceleni kwefomethi yesikhangiso esezingeni elifanele yedeskithophu - kodwa okwamanje kuphela. Kusukela ngo-Okthoba 26, 2016, abakhangisi ngeke besakwazi ukudala noma ukulayisha izikhangiso ezijwayelekile zombhalo. Ekugcineni, lezi zikhangiso zizophela emlandweni womlando wokusesha okhokhelwayo futhi zinyamalale ngokuphelele ekhasini lakho lemiphumela yosesho. IGoogle inikeze abakhangisi